Gudaha ka eeg Madaxweynaha Somaliland Md Muuse Biixi Cabdi oo Wareegto ku soo saaray In u Cafis ugu fidinaayo Maxaabiista Dambiyada Fudud | ToggaHerer
← Daawo: ” Madaxweynaha ayaa xaq u leh in uu Comminsionka Baadho oo uu gudi u magacaabo isagaana awooda distoorku siiyey in uu arintooda dhex galo” Cabdilaahi Jawaan
Wasiirka wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Somaliland, Sheekh Cabdirisaaq Xuseen Albaani, ayaa ku dhawaaqay in ay ciid tahay caawa oo isniin ah. Waxa uu sheegay in bilashada bisha Shawaal laga arkay deegaanno Somaliland ah. →
Gudaha ka eeg Madaxweynaha Somaliland Md Muuse Biixi Cabdi oo Wareegto ku soo saaray In u Cafis ugu fidinaayo Maxaabiista Dambiyada Fudud
Published on May 1, 2022 by Oday
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegto madaxweyne oo summadeedu tahay JSL/XM/WM/222-857/052022, uu Cafis Guud u fidiyey Maxaabiista dembiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xidhan.
Markaan Arkay: Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland, Qodobka 90aad, Farqadiisa 5aad;
In laga bilaabo taariikhda maanta aan Cafis u fidiyo, munaasibadda ciidda Fidriga awgeed maxaabiista dembiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xidhan, oo tiradoodu dhan tahay 360 (Saddex Boqol iyo Lixdan) maxbuus. Cafiskani saamayn kuma laha xuquuqda madaniga ah iyo raad ciqaabeedka, ka dhalanaya dembiyadda ay ku xukunnaayeen. Waxa cafiskan fulinaya Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka, iyada oo la raacayo liiska Maxaabiista.